Zviponese wega 8 euros nekudhawunirodha aya matatu emahara kunyorera kwenguva shoma | IPhone nhau
Zviponese wega 8 euros nekudhawunirodha aya matatu emahara kunyorera kwenguva shoma
Isu tinodzokera kumutoro kunotora mashoma mafomu ari enguva shoma inowanikwa kurodha mahara. Mazuva mashoma apfuura ndakakuzivisa nezvekushandisa kwevhiki iyo Apple yakanga yasarudza kurodha mahara kwenguva yakati rebei, Mabusy Shapes, kunyorera kudiki kweimba, pakati pemakore maviri kusvika mashanu ezera. Asi mune ino chinyorwa hatichataura nezve mafomu kana mitambo yevana vadiki, asi asi yevabereki. Iwo mafomu atinokuratidza kuti utore nhasi ndeaya: Tabatach, iyo RPG Yekushanya Kuti Fate mutambo uye CloudPlayer Pro.
2 Kutandara kune ramangwana
Tabatach ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye0,99 euros uye zvinotibvumidza isu kudzora maitiro ezuva nezuva atinoita mujimu kana kunze kwayo. Tabatach inotibvumidza kutsanangura kupindirana pakati pemaitiro, nguva yekuzorora, kudzokorora kutenderera ...
Kutandara kune ramangwana
MuAdventure To Fate, iyo inotipa isu kusvika gumi nesere sarudzo yekugadzirisa kugona kwehunhu hwedu, iine anosvika kumatanhatu emabasa akasiyana. Tichafanirwa kukunda simba rakaipa iro rakakunda mauto edu uye ndokuwisira pasi zvese zvivakwa zvedu. Adventure To Fate, ine avhareji chiyero che8 nyeredzi kubva pa6 inogoneka. Uyu mutambo Iine mutengo wenguva dzose muApp Store ye3,99 euros.
Kuzvivaraidza Kune Ramangwana: Kutsvaga Kune Ramangwana JRPG4,49 €
Kusvika kwekutepfenyura mimhanzi masevhisi yave nzvimbo yakajairika kune vazhinji vashandisi, zvisinei havazi vese vari kuda kana kukwanisa kubhadhara kunyoreswa kwemwedzi. Kune vese avo vashandisi vane raibhurari hombe yemumhanzi uye vanoda kukwanisa kuridza mimhanzi yavo yavanofarira kubva kuchinhu chavo, CloudPlayer Pro ndiyo yakanakira kunyorera, iyo ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye3,99 euros. CloudPlayer Pro inotibvumidza kutamba raibhurari yedu yemumhanzi zvakananga kubva kune redu rekuchengetedza sevhisi, ingave iri Dropbox, Yandex, Google Drive, OneDrive kana Bhokisi.
CloudPlayer Pro - odhiyo mutambi kubva kumakore4,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Zviponese wega 8 euros nekudhawunirodha aya matatu emahara kunyorera kwenguva shoma
Matatu matsva matsva anoratidza iyo AirPods: yakawanda yekusimudzira uye shoma stock